Ebe nchekwa Kildare - IntoKildare
Obodo Kildare malitere na 5th narị afọ wee wepụta aha ya na Gaelic, Cill Dara nke pụtara Church of Oak, ebe obibi ndị mọnk nke St Brigid hiwere na saịtị n'okpuru osisi oak. Obodo a nwere ihe nketa na akụkọ ihe mere eme yana 19 mbụth Marketlọ ahịa Market nke narị afọ na -enye ntakịrị nkọwa banyere ihe gara aga site na ahụmịhe nke eziokwu mepere emepe, ezigbo mmalite maka nleta gị. Katidral St Brigid na Round Tower dị nso - ụlọ elu ahụ guzoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 33 ma bụrụ ụlọ elu kacha elu nwere ike ịrị elu na Ireland, ị ga -ahụrịrị na ị ga -ahụ nnukwu obodo na Curragh Plains. Ọdọ mmiri St Brigid dị obere njem na nleta Solas Bhride Hermitages ga -akọ akụkọ ya.
Asọmpi moto mba ụwa nke mbụ ga -eme na Britain ma ọ bụ Ireland, Gordon Bennett Cup, gafere na Kildare. N’oge ọhụụ, obodo a bụ ebe ndị na -ere mmanya na -eleta Kildare Village na maka ọmarịcha ụbọchị na Irish National Stud na Gardens ndị ama ama.
Chọgharịa ogige ndị Japan ama ama na Irish National Stud.
Ọdụ ụgbọ ala dị na M7 na Monasterevin, nkwụsị zuru oke na njem gị.